के हुन्छ सबै किरा-फट्याङ्ग्रा हराए भने ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
के हुन्छ सबै किरा-फट्याङ्ग्रा हराए भने ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ५ माघ आईतवार १५:१८
हाम्रो पर्यावरणको संरक्षण गर्नका लागि र खानेकुरा उत्पादन गर्न किरा-फट्याङ्ग्राको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
“हामीले संसारबाट सबै किरा-फट्याङ्ग्रालाई हटायौँ भने हामी पनि मर्छौँ,” लण्डनको न्याचुरल हिस्ट्री म्यूजियमका वरिष्ठ क्यूरेटर इरिका मक्यालिस्टरले बीबीसीको क्राउड साइन्स कार्यक्रमलाई भनिन्।
‘हामी पनि मर्छौँ’
किरा-फट्याङ्ग्राले जैविक संरचनालाई भत्काउँछन् जसका कारण सड्ने प्रक्रियाले गति पाउँछ। यसले माटोलाई पुनःपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ।
“यदि किरा-फट्याङ्ग्रा नहुने हो भने… त्यो एकदमै अप्रिय हुन्छ। किराहरू बिना हामी फोहोर वस्तुमा पौडिरहेका हुन्थ्यौँ वा मरेका जनावर जताततै भएको ठाउँमा हुन्थ्यौँ,” मक्यालिस्टरले भनिन्। उनीहरू चरा, चमेरा र साना स्तनधारीका आहारा पनि हुन्।
“जनावर, चरा वा माछाको करिब ६० प्रतिशत खाना किराहरूमै निर्भर हुन्छन्। त्यसैले किराहरू नभए चरा, चमेरा, भ्यागुता र माछा पनि हराउँछन्,” युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका फ्रान्सिस्को सान्चेथ बायोले भन्छन्।
अन्य जीव र जनावरलाई खानेकुराको स्रोत बन्नुबाहेक किराले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा पनि दिन्छ। त्यो सेवा भनेको परागसेचन गर्ने काम हो जसले खानेकुरा उत्पादनका लागि मुख्य भूमिका खेल्छ।
किराहरूले दिने यो सित्तैको सेवाले मानव जातिलाई ३५० अर्ब डलर बराबरको फाइदा पुर्‍याउने एक अध्ययनले देखाएको छ।
“परागसेचन गर्ने काम धेरैजसो फूल फुल्ने बिरुवाको लागि आवश्यक पर्छ। हामीले उत्पादन गर्ने ७५ प्रतिशत अनाजको बिरुवा पनि यसमा पर्छ,” सान्चेथ-बायोले भने।
तर पनि हामीले किरा-फट्याङ्ग्राबाट पाउने यस्तो फाइदाको बेवास्ता गर्छौँ। धेरै देशमा माहुरीजस्ता परागसेचन गर्ने किराहरूको सङ्ख्या घटेको छ।
मोनार्क जस्ता पुतलीका प्रजातिहरू जसले जङ्गली फूलहरूमा पराग सेचन गर्छन् तिनीहरू पनि घट्ने क्रममा छन्। हामी यो समस्यालाई ढिलो नहुँदै बेवास्ता गर्ने खतरामा छौँ किनभने हामी तिनीहरूलाई मार्न खोजिरहेका हुन्छौँ।
किरा फट्याङ्ग्राको संसार हामी धेरैजसोलाई निकै ठूलो लाग्छ। अमेरिकाको स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूसनका अनुसार मानवहरूको भन्दा किराहरूको सङ्ख्या १७ गुणाले बढी हुन्छ।
उक्त संस्थाका अनुसार एक समयमा १० क्विन्टिलियन किराहरू पृथ्वीमा भेटिन्छ। एक क्विन्टिलियन भनेको अमेरिकी अङ्ग्रेजीमा एक अर्ब अर्ब हो।
सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनले जर्मनीको ६० वटा संरक्षित क्षेत्रमा करिब ३० वर्षमा उड्ने किराको सङ्ख्या ७५ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ। प्वेर्टो रिकोमा चार दशकमा किराको सङ्ख्यामा ९८ प्रतिशतले कमी आएको एउटा अध्ययनले पत्ता लगाएको छ। यो दरमा थुप्रै किराहरू चाँडै हराउन सक्छन्।
“अहिलेको अवस्थामा सुधार नल्याए एक शताब्दीमा हामीले किराका धेरै प्रजातिहरू हराएको देख्नेछौँ,” सान्चेथ बायोले भन्छन्। रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोग र जलवायु परिवर्तनका कारण पनि किराहरूको सङ्ख्यामा कमी आइरहेको छ।
वैज्ञानिकहरू सुधार गर्ने समय बाँकी रहेको बताउँछन्। “खेत वरपर रुखहरू रोपेर वा किरालाई झाडी उपलब्ध गराएर, खतरनाक विषादीहरूलाई बजारबाट हटाएर र जलवायु परिवर्तनमा असर पुर्‍याउने कार्बन उत्सर्जन घटाउने नीतिहरू अपनाएर यसो गर्न सकिन्छ,” सान्चेथ बायोले भने।
उनले मानिसहरूले आफूले अर्गानिक खानेकुरामात्रै खाएर पनि घट्दै गएको किराको कमीलाई रोक्न मद्दत गर्ने बताए।
तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेको रूपन्देहीको गाउँ–शहरका खेतबारी मात्र होइन सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा अधिक वर्षा हुने क्रम शुरू